Tag: elekọta mmadụ mgbasa ozi | Martech Zone
Tag: mgbasa ozi mmekọrịta
Monday, June 24, 2019 Satọde, Febụwarị 27, 2021 Douglas Karr
Ma ị na-ebipụta ụda ma ọ bụ vidiyo, ị maara na mgbe ụfọdụ ọdịnaya ahụ bụ akụkụ dị mfe. Tinye edezi na njikarịcha maka usoro mmekọrịta ọ bụla ma ị na-etinyekwu oge na mmepụta karịa ka ị na-edekọ. Ihe isi ike a bụ ihe kpatara ọtụtụ azụmaahịa ji ezere vidiyo n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ vidiyo dị egwu. Promo.com bụ usoro okike vidiyo maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ. Ha na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta ibu nke ọdịnaya anya yana